Alex Telles ayaa Manchester United kaga soo biiray Porto, taasoo halis gelineysa booska Luke Shaw.
Manchester United ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca bidix ee reer Brazil Alex Telles iyadoo lagu soo waramayo inay .4 15.4million (€ 17m) kaga soo qaateen kooxda Porto.
Telles, oo 27 jir ah, ayaa saxiixay qandaraas afar sano ah oo ikhtiyaar u ah 12 bilood oo dheeri ah, wuxuuna ku yimid qiimo jaban sababtoo ah kaliya hal xilli ciyaareed ayaa uga haray heshiiska uu kula jiro Porto.
United ayaa lala xiriirinayay Telles isbuucyo dhowr ah, iyadoo kooxda ay umuuqato inay doorbideyso inay isaga raadsato ka dib markii lagu soo waramayo inuu diiday inuu ogolaado shuruudaha Real Madrid ee wadahadalada Sergio Reguilon, oo ku biiray Tottenham.
Si kastaba ha noqotee, warar xan ah oo ku saabsan xiisaha ay u qabaan Telles iyo Reguilon ayaa markii hore kiciyay su'aalo sababtoo ah joogitaanka Luke Shaw iyo Brandon Williams oo ah dookha bidix ee United.
Laakiin Shaw muddo dheer ayaa lagu dhaleeceynayay la'aanta wax soo saarka weerarka, halka Williams - oo saxiixay heshiis cusub oo afar sano ah bishii Ogosto - uu ku guuldareystay inuu ka saaro.
Waxaa la rajeynayaa in Telles uu ka soo bandhigi doono ilo fiican oo dhanka weerarka ah iyo booska daafaca dambeedka midig marka loo eego dooqyadii hore ee United.
Wax soo saarka akadeemiyada Juventude ayaa abuuray isku celcelis labo fursadood 90kii daqiiqo ee horyaalka Primeira Liga tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore, halka uu dhaliyay 13 gool isla markaana uu dhigay 10 kale.
In kasta oo ay inyar filayaan in Telles uu gaadho tirooyinka noocan ah Premier League, waxay muujineysaa sida uu ugu fiicnaan karo seddexaad ee ugu dambeysa.
Marka la barbardhigo, Shaw iyo Williams midkoodna ma diiwaan gelin caawinaad tan iyo markii xilli ciyaareedka 2019-20 Premier League uu billowday, halka kan dambe uu leeyahay ujeedo keli ah kan horena ma lahan.
Marka laga hadlayo fursadaha la abuuray, Williams celcelis ahaan 1.2 baas ayuu fure u ahaa kulan kasta halka Shaw kaliya uu helay 0.9.
Waxaa sidoo kale jiray su’aalo culus oo laga keenay Shaw ka dib ceebtii 6-1 ee Axadii ka soo gaartay Tottenham, iyadoo daafaca bidix uu qeyb ka yahay eedeymaha ugu yaraan labo gool.